Zavamaniry anaty trano | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ahoana ny fomba hanerena ny Shefler hiondrika?
Ahoana ny fomba ahazoana an'i Shefler hiroboka marina? Tsy hiteny aminao amin'ny Internet aho! Mila mamboly ny zavamaniryo indray mandeha ianao, mamafy indray mandeha isan'andro, ary isan'andro, ny rano kely kokoa, dia tokony hijoro ...
Torohevitra momba ny chestnut
Torohevitra hikarakarana tratra an-trano manana chestnut toy izany aho, holazaiko anao tsy misy rohy mankany amin'ny Internet, maniry tsara izy, tia manondraka amin'ny fahavaratra, tsy ilaina ny mandevina ny voanjo, amin'ny ririnina dia mandatsaka ravina vitsivitsy ao ...
Inona no ilàna ny Kalanchoe?
Karazan-tany inona no ilaina amin'ny Kalanchoe? Ny tany ho an'ny Kalanchoe dia alaina tsy miandany na somary asidra (pH 5,5-6,5). Ny zavamaniry dia maniry tsara amin'ny fangaro mahazatra ho an'ny succulents. Ny zavamaniry tanora dia nafindra tao anaty fangaro 4 ...
Inona no fikarakarana tsara an'i Muraya. Nahoana no mipoitra ny voninkazo tsy misy voninkazo ao anaty Murai kely 2 kely kely?
Inona no fikarakarana tsara an'i muraya. Fa maninona ireo voninkazo tsy mitsaoka no milatsaka avy any muraya kely 2 taona? Tamin'ny lohataona dia nividy muraika iray aho. Tokony ho 10 sm ihany koa. Ny didim-pitsaran'ireo mpamboly voninkazo dia tsy azo lavina - tsy hamony. ...
Ahoana ny fomba fitondra ny orkide?
ahoana ny fanondrahana orkide? Nilazana aho fa ilaina ny manisy rano tsy tapaka amin'ny sump ary alao antoka fa eo foana izy io, ary ataoko izany. Ity no tokony hatao hamerenana ny orkide ...
Azafady mba lazao ahy raha azo atao ve ny mampiasa jiro ultraviolet ho an'ny orinasa indostrialy?
Azonao atao ve ny milaza amiko raha azo ampiasaina amin'ny zavamaniry anaty trano ny jiro UV? Misaotra anao, fantatro ny momba ny ULF, fa azo atao ve ny mampiasa jiro DNAT mba hanazavana bebe kokoa ny zavamaniry toy ny voatabia, peppers, atody. Ny fampiasana ultraviolet ...
Ahoana no hanomezana sakafo ny phalaenopsis mamony?
Ahoana ny famahanana ara-dalàna ny phalaenopsis mamelana? Phalaenopsis - maitso maitso tsy mitongilana, orkide maniry tsy tapaka; ny karazany sy ny hybridia mamelana saika mandavantaona dia mety ho an'ny vao manomboka. Miaraka amin'ny fikarakarana sahaza azy, mamelana be i Phalaenopsis, mandritra ny fotoana maharitra ...
Lazao ahy izay tokony hatao raha miala amin'ny taho maina ny palmia ?? Misy vongan-dranona manokana ve?
Lazao amiko izay tokony hatao raha maina ny tendron'ny ravin'ny hazo rofia? Misy zezika manokana ve? Tsy haiko ny manondraka, fa ny fisehon'ny ravina fahefatra amin'ny hazo rofia, dia manomboka maina ilay voalohany. Tsy maintsy ...
Ahoana ny famindrana ny sukululent? Tiako ny torolalana amin'ny antsipiriany ho an'ny mpandray anjara.
Ahoana ny fomba hamindrana ny succulents? Mila torolalana amin'ny antsipiriany ho an'ny vao manomboka aho. Fifidianana vilany. Ilaina ny misafidy ny habe sy ny endrika mety amin'ny vilany, miankina amin'ny fivoaran'ny rafitry ny karazana cactus izay alehanao ...
Inona no mampidi-doza dieffenbachia? Nahoana no lazaina hoe poizina?
Nahoana no mampidi-doza ny dieffenbachia? Fa maninona no lazaina fa misy poizina? momba fonon-tànana - milay! Ary koa respirator! Ary rakibolana iray hafa! Novakiako fa miteraka tsy fananan'ny lehilahy hery ary mampidi-doza ho an'ny saka. Ny saka…
Tokony hosotroina ny voninkazo ao anaty sobika?
Mila rano ve ny voninkazo ao anaty harona? alao antoka fa Eny, azo antoka fa misotro rano koa ny voninkazo. fa mila fenoina indray. Ilaina amin'ny rano !!! Tatiana, salama hariva! Ity spaonjy voninkazo maitso ity dia tsy maintsy rakotry ny rano TSY MISY !! ...
Ny fery dia mivadika amin'ny ficus
Ficus mamela curl Mety misy antony maro amin'izany. Mba hanilihana ny aretina dia tokony hodinihinao tsara ilay ravina miolakolaka raha misy tasy sy tsy fanarahan-dalàna. Raha izy ireo, dia azo inoana fa ny ficus ...
inona no atao hoe cactus?
inona ny cactus maintso ... miaraka amin'ny tsilo Cacti dia zavamaniry mahavokatra izay misy fotony feno volo feno volo. Saika ny cacti rehetra dia tsy manana ravina mahazatra, ny ankamaroany manana tsilo. Izy ireo dia…
Inona no fizaran-taona mitombo ao amin'ny zavamaniry?
Inona no vanim-potoana maniry ho an'ny zavamaniry? Ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana, ny fitomboana mavitrika. Ity fanontaniana ity dia efa teto http://otvet.mail.ru/question/17180703 Ny vanim-potoanan'ny legioma (avy amin'ny famelomana ny vegetatio latina, ny fitomboana) dia vanim-potoana iray ahafahan'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ...
Azo atao ve ny manamboatra hazo vola? Sampana mavesatra be ... mihohoka ... ary vaky ...
Afaka manety hazo vola ve ianao? Sampana mavesatra be ... mihohoka ... ary vaky ... Mafy! Ny tanako dia tsy miarina amin'ny volon-doha radika toy izany. Mazava ho azy fa afaka. Hetezo araka izay itiavanao azy, avy amin'ny ...
Rahoviana ianao no mila manilika ny zana-tovolahy Krassula?
Rahoviana ianao no tokony hipaoka ny tavy tanora Crassula? Mikintona aho rehefa mivoaka ravina kely roa. Nataoko ho fenitra iray ny ahy. Amin'ny ankapobeny dia mitombo miaraka amintsika izy io nefa tsy misy pinch ... Ary ahoana ny ...
Nahoana ny ravina no miverina mavo? Inona no tokony hikarakarana an'io zavamaniry io?
Fa maninona no mavo ny ravina Kalanchoe Kalandiva? Karazana fikarakarana inona no ilaina amin'ity zavamaniry ity? Miala mavo ny ravina ary mihintsana Ny ravina ambany an'ny zavamaniry olon-dehibe lasa mavo mazàna rehefa mandeha ny fotoana dia mihintsana. Rahoviana ity ...
Inona ireo jiro tena ampiasaina amin'ny fitomboan'ny cannabis?
Inona avy ireo jiro mety amin'ny fitomboan'ny rongony? Ho an'ny hazavana fanampiny, ny jiro mampirehitra dia tsy mety amin'ny famirapiratana fotsiny, mandany 3% fotsiny amin'ny herinaratra lany ary ny ambiny dia taratra hafanana. Safidy jiro azo ekena kokoa ...
Karazan-javamaniry inona ilay "MORNING GLORY"
Inona no zavamaniry "VONINAHITRA MORNING" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - fianakaviana: Convolvulaceae; - anarana mahazatra: Ipomoea; - karazany: violacea (Morning Glory) - niandohana: tendrombohitra atsimon'i Mexico, Guatamala, India Andrefana, ary ny tropika any atsimo ...
Iza amin'ireto no tsara kokoa ho an'ny orinasa indostrialy?
Iza no tany mety indrindra amin'ny zavamaniry anaty trano? Ankehitriny ireo mpivarotra dia mivarotra fifangaroan-tany isan-karazany ho an'ny zavamaniry isan-karazany. Vakio ny famaritana amin'ny fonosana, aseho eo ny zava-drehetra. Ho an'ny biby fiompy ao ...
52 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,559.